Ifektri yokhenketho-Xuzhou Changyu Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd.
Izinto zokuhombisa zeplywood zinezixhobo zangoku
Singumvelisi wePlywood yoMgangatho ophezulu e-China. Kwaye ngo-2014, inkampani yafikelela kwisivumelwano sokusebenzisana ngokubambisana malunga nokudluliselwa kwetekhnoloji kunye ne-ICC e-Itali, ukubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kuphuhliso lwenkampani.
Kungenxa yoko le nto umgangatho weplywood yethu uhlangabezana nazo zonke iimfuno.
Sibamema ngokunyanisekileyo abathengi kwinkampani yethu ukuba bandwendwele isikhokelo sethu, kwaye sibabulele bonke abathengi ngokuqaphela kwethu ngamaplanga.
Silandela ukusetyenziswa okuzinzileyo kwezixhobo zemithi ngokudlula kumgangatho wokuqala, sihlala sakha igama elihle nelicocekileyo CHANGYU-HW PLYWOOD, eqinisekisa imigaqo-nkqubo ethembekileyo nephezulu kunye nabo bonke abathengi bethu abaxabisekileyo.
Sineelebhu zokwenza iinkuni ezinobuchule, ezinokwenza uvavanyo olunamandla kuzo zonke iintlobo zeplywood. Izinto zovavanyo zibandakanya: iFormaldehyde Emission, Adhesive Strength, Elastic Modulus, Static Bending Strength, Horizontal Shear Strength, Screw Holding Force njalo njalo.